Momba anay - Zhongnan Import and Export Co., Ltd.
Zhongnan Import and Export Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2011 ary miorina ao Yiwu, Sina, tanàna lehibe manerantany iraisampirenena malaza. Ny orinasa dia misy ny Minisiteran'ny Varotra ivelany, Sampan-drakitra fanadihadiana ary ny Sampan-draharahan'ny Fanatobiana entana. Izy io dia miompana indrindra amin'ny asa rehetra mifandraika amin'ny fanafarana sy ny fanondranana, manome ny fandikana ny Espaniôla sy Anglisy, ary koa ny fizotry ny varotra ivelany ho an'ny fividianana vahiny, ny fizahana ary ny fandefasana any Shina. Miaraha amin'ny mpanjifa mandritra ny fizotry ny fividianana amin'ny faritra rehetra any Sina, manangona sy mitahiry fandefasana, manamarina ny fomba sy ny kalitao, miantoka ny kalitaon'ny fividianan'ny mpanjifa, ary manohana ny fitomboan'ny mpanjifa hahatratra ny fitomboan'ny tsirairay.
Fitaovana any amin'ny birao, kojakoja, kilalao, fivarotana lehibe, kojakoja fety, fanomezana mamorona, vokatra elektronika, milina sns ...
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny fitsipiky ny "miorina amin'ny fahamendrehana, ny lazany aloha" ary ny toetra tsara fanompoana, ary nametraka laza tsara sy laza eo amin'ireo mpandraharaha sy mpamatsy entana vahiny. Taorian'ny fampandrosoana 10 taona, hatramin'ny mpanjifa voalohany ka hatramin'izao, dia any Però, Bolivia, Mexico, Arzantina, Kolombia ary firenena maro any Amerika atsimo no misy ny mpanjifa.
Miarahaba anao am-pitiavana izahay avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hanatevin-daharana anay hiara-hitombo!
Ny orinasa dia manana ekipa fampandrosoana teknolojia matihanina miaraka amin'ny fahalalana matihanina manankarena sy traikefa manan-karena R&D eo amin'ny sehatry ny tambajotra sy ny haitao amin'ny serasera, ny firaketana ny angon-drakitra marobe, ary ny ekipa serivisy matihanina manana kalitao tsara hanomezana mpanjifan'ny governemanta sy orinasa avo lenta sy mahomby. . Ekipa mpanompo.
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny fampidirana mpiasa sy ny fiofanana ary ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasa efa misy. Raha ny drafi-pivoaran'ny orinasa dia manintona sy mampitombo hatrany ireo mpiasa teknika ao amin'ilay orinasa ny orinasa, hany ka mitombo hatrany ny habetsaky ny mpiasa teknikan'ilay orinasa, izay nahatratra 50% mahery. Mandritra izany fotoana izany dia manamafy ny fanofanana ireo mpiasa efa misy izy io. Araka ny filàn'ny orinasa sy ny fivoaran'ny tenany manokana dia omen'ny orinasa fampiofanana ireo mpiasa. Ny iray dia ny fanatsarana hatrany ny fahaiza-manao ara-teknika amin'ny alalàn'ny fianarana sy ny miasa ao anatin'ny orinasa, ary miaraka amin'izay koa ny fanaovana fiofanana ivelany ho an'ireo mpiasa mahay. Hanatsarana ny fahaizan'izy ireo mivelatra ara-teknolojia. Ny fanohanana dia omena amin'ny fanabeazana akademika aza. Mandritra izany fotoana izany dia manome safidy tsara hafa amin'ny resaka karama, trano sy fiaraha-miasa izy ary mandray talenta hiditra ao amin'ilay orinasa.
Rehefa afaka folo taona ny fanangonan-karena sy ny fampandrosoana ny folo taona, manana mpanjifa ana hetsiny ny orinasa. Mandritra ny famolavolana ny orinasany fototra, ny orinasa dia manafaingana ny fanovana azy, manafaingana ny fampandrosoana isan-karazany, ary manangana mavitrika sehatra e-varotra teknolojia avo lenta izay mifanaraka amin'ny toetran'ny indostrian'ny serivisy maoderina
Izahay manokana amin'ny Sourcing ny vokatra, fanangonana fampahalalana & fitarihana tsena, ohatra amin'ny fanomezana, baiko miaraka, baiko fanarahana, fanaraha-maso kalitao, fandoavam-bola azo antoka, fanodinam-bola, fandefasana ary antontan-taratasy fanondranana mifandraika sns. Manana mpiasa matihanina izahay hamaly ny filan'ny mpanjifanay, ary izahay mampifandray orinasa mivantana mba hampitomboana ny tombom-barotra.